Naraka: Bladepoint Ongororo - Hondo Royale Brawl yePros - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | February 21, 2022 | nhau, Miedzo yemitambo, pamusoro, Vhidhiyo mitambo
Chikamu 74%Chikamu 74%
Mutambo mutsva wehondo royale! Ok, hazvisizvo zvekugadzira. Rudzi rwacho rwave kurova manje. Naraka: Bladepoint zvakadaro inotora nzira nyowani: iyo yechibhakera. Panzvimbo ye bazooka, pfuti yekurova uye co, vanogadzira "24 Varaidzo" vanovimba nekarati - iyo studio inouya, yakakodzera sei, kubva kune yechinyakare martial arts nyika: China.
Huyai titambe denderedzwa re "Battle Royale" - iyi haichashandiswi otomatiki kukwezva vateveri vemitambo kubva kuseri kwechitofu. Kana iwe usati watotamba PUBG, Fortnite kana Kufona kweDuty: Warzone, haugone kukwira kumusoro kupfuti yakawanda. Iyo yekuChina yekuvandudza studio 24 Varaidzo inoda kugadzira nyowani yekukurudzira - ine martial arts.
Martial Arts paShrink Arena
Naraka: Bladepoint's innovation haisi pachena pekutanga kuona. Vatambi makumi matanhatu vanokandwa munhandare yehondo iyo inogara ichiderera. Sezvo Death Zone inokura, mavara anomhanya nekukwira, kuunganidza zvombo nezvombo, kuzvisimudzira, uye kuunganidza zvinhu zvekuporesa. Izvi zvinokandwa kunze, mupfungwa yechokwadi yeshoko: pachinzvimbo chekupfura vanopikisa nepfuti kubva kure, vatambi muNaraka: Bladepoint inofanirwa kurwa padhuze kuitira kuti vakwanise kudya zvakanaka. Kune zvombo zvakasiyana-siyana, asi kushandiswa kwazvo kwakaganhurirwa uye kunoenderana nekupwanya. Saka zvinonyanya kushanda zvakanyanya kutarisana nevanopikisa. Pakupedzisira, murwi mumwe chete anoramba, kana kuti boka revatatu.
Uye boom, 24 Varaidzo vakatogadzira nyowani sub-genre: iyo martial arts battle royale game. Pfungwa inodzika zvakanaka nevatsoropodzi, paSteam, uye nesu zvakare. Pasinei nezvimwe zvipingamupinyi zviri pachena. Asi mumwe pashure pomumwe. Naraka: Bladepoint haingoite zvinhu zvishoma zvakasiyana maererano nemutambo wemutambo, zvakare yakanakisa kupfuura vazhinji vevakwikwidzi vayo uye yakakosha nenzira yayo nekuda kwekumisikidzwa kweAsia. Chinhu chekutanga chinokurova ndechekuti pane chaicho chinyorwa chimwe, chinoti tsika dzeAsia. Panzvimbo pekungokandwa munhandare hombe inochinjika, semu Playerunknown's Battlegrounds, vagadziri veChinese vanovimba nemhepo.
Muchikamu chekutanga iwe unosvika pakuziva mutambo, unonatsa hunyanzvi hwako kurwisa bots - asi izvo hazvibatsire kurwisa vanhu vanopikisa. Mufananidzo: game point
Usangogogodza, tarisawo - ndiyo motto. Uye saka iwe dzimwe nguva unofamba-famba, tarisa nharaunda yako, rega kutarisa kwako kudzungaire. Kusvikira nzvimbo yerufu yapinda. Ipapo inofanirwa kukurumidza - iwe unozviziva kubva kune mamwe Hondo Royale mitambo. Iyo idiki nhandare yehondo inova, mukana mukuru wekusangana nevamwe varwi vehondo. Kune vashoma vavo, rimwe nerimwe rakashongedzerwa nesimba uye kushaya simba uye yakasiyana zvachose yekutamba uye kurwisa maitiro. Magamba anoenderana neanozivikanwa archetypes: mhondi ine mashiripiti erima, mumongi wekurwa ane kusheedza mabhero, murwi ane hunyanzvi hwemoto - Naraka: Bladepoint yakavakirwa pane zvauri kujairana nazvo kana wakambotamba mutambo wetsiva.
Matekiniki ehondo ihwamanda mune iyi Hondo Royale pfungwa: tanga wapfura mupikisi ari kure uye wobva watanga. Iwe unorova, unocheka uye unobaya vavengi vako nezvibhakera, mapakatwa nemapfumo, uchiita hunyanzvi hwekumhanyisa uye kumhanya-mhanya. Iyo yekupedzisira inogona kutsamwisa, nekuti iyo yekutarisa kazhinji inotambura. Chikonzero chiri nyore: kwaunogona kuteedzera zviri nyore zvinzvimbo zvevavengi muhondo dzakasiyana, unofanirwa kuita nhamburiko muhondo yepedyo. Mushure mezvose, tutorials nemitambo yekudzidzisa inopa hwaro uye inopa mukana wekutanga kuyedza zvombo uye hunyanzvi pasina kushushikana. Vapikisi veAI havasisiri kungodzidzira dummies, vanowanzoita vakapusa - hapana kana chichienzaniswa nevapikisi vevanhu vaunosangana navo muhondo dzakarongwa. Pasinei nekugadzirira, iwe hauna kugadzirira zvinotevera: iwe unowana musoro wakaoma pakutanga. Izvo zvinoshungurudza, asi zvakare zvinokurudzira - nekuti kunyangwe kukundwa kwese: Zvinoratidza zvinogoneka kana iwe uchigona varwi vaunofarira.
Uye chimwe chinhu chiri pachena chakasiyana nezvaNaraka: Bladepoint. Panzvimbo yemahara-2-kutamba modhi, vanogadzira vanovimba nekutenga-2-kutamba - iwe unofanirwa kutenga mutambo kamwe chete, zvino unogona kubhejera. Kune microtransactions zvakadaro uye kwete yakanyanya kushomeka. Iyo inozivikanwa Hondo Pass, iyo inogona kuridzwa mahara, inogona kutengwa mu-mu-mutambo chitoro pamwe nemabhokisi ekupamba kana matehwe. Mushure mezvose: Yese gem ndeyekusarudza uye yekushongedza. Iwe haudi chero cheizvozvo, kunyangwe mamwe matehwe achinyatso kuyedza. Dai mutambo wacho wanga usiri kukwiza zvinopihwa zvekutenga mumhino dzemutambi zvakanyanya, unogona kungofuratira chitoro - asi zvinogumbura dzimwe nguva.
Iye murume akapfeka yero tracksuit anotaridzika senge - chaizvo: ivo vanogadzira vari kutamba neiyo yakakosha theme "martial arts". Mufananidzo: 24Varaidzo
Naraka: Bladepoint inodhirowa pane yayo inotyisa melee system. Iyi ndiyo nyeredzi yehondo royale mutambo. Chinonyanya kukosha. Saka icho chidimbu chemutambo wemutambo chinoda hunyanzvi. Hazvisi nyore, kunyangwe kana kutanga kuchinakidza. Mafambiro ekutanga anokurumidza, kudzamara wapikisa vanopikisa uye uchivatungamira nemhino, maawa mazhinji achapfuura.
Isa - polish
Nekudzvanya mbeva, iwe unorova zvakajairika kurwisa izvo ketani combos zviri nyore uye zvinokonzeresa mhedziso yakasimba. Charge kurwiswa zvakare chikamu chekurwa, chine simba, asi zvakare chinogona kuverengerwa nenguva chaiyo. Dambudziko: hapana chimwe cheizvi idambudziko rinopesana neakaneta kuita bots. Kurwisana nevashori vevanhu, kurwa dzimwe nguva kunopedzisira kwava kurwa. Tactics? hapana. Inogogodzwa, izvo makiyi anopa - mukupedzisira mutambi akakwanisa kuunza kumwe kurwiswa kune chinangwa anokunda. Dzimwe nguva kurwa kunenge kusingaite sekwakarongwa zvakakwana, kune bongozozo uye dzimwe nguva kusarongeka.
zvinogara zvakadaro here Aihwa. Zvisinei, munhu anofanira kutanga asvika pazivo iyi. Unorohwa kusvika wazvibvunza kuti kana playstyle yako risiri iro dambudziko guru pane ese. Icho chokwadi ndechekuti, iwe unongohwina chete neakakodzera ekurwisa matekiniki, uye iwo kashoma zvinosanganisira kungokanda ese anokwanisika combos kune anopikisa. Famba uye dodge, dodge uye fambisa-ino neapo kurova, kurwiswa kwakanyatso-nguva: iyi ndiyo nzira yaunosiya zvishoma nezvishoma pasi vavengi vako nekuzunguza kwese uye kuzunguza kwebakatwa rako.
Hondo Royale inogona zvakare kuve yakanaka uye yemhepo - iyo yekuAsia kurongeka inotyisa. Mufananidzo: 24Varaidzo
Hunyanzvi hwaNaraka: Bladepoint ndeyekumutsa zvikanganiso kubva kumuvengi wako uye shandisa yako playstyle kurwisa ivo. Pari panguva ino apo kukosha kwekurwiswa kwemunhu wega wega kwakasiyana kwakasiyana kunobuda pachena. Kazhinji ivo havagone kuita sarudzo mukurwa, asi vanotsigira. Iwe unofanirwa kukunda chikamu chekutanga, asi iwe unofanirwawo kutsungirira kuvhiringidzika. Paunoita izvozvo, Naraka: Bladepoint inova inobatikana pane imwe nguva. Pakazere, mutambo uyu wakanangana nevatambi vane ruzivo kana vateveri vane chido chekuzviziva. Zvinotora moyo murefu, nekuti 24 Varaidzo inogara ichishanda pakugadzirisa bug uye kugadzirisa.
Nhamba yevatambi: vakawanda
Genre: mutambo wechiito
Subgenre: Hondo Royale
Mugadziri: 24 Varaidzo
Gore rekuburitswa: 2021
Mapuratifomu (Test system): PC
Mariro: kubva ku19.99 euros / yemahara
zvokutaura Naraka: Bladepoint mutambi werudzi uyo vatambi vanga vakamirira - pamwe havasati vazviziva. Vagadziri veChinese kubva ku24 Varaidzo vari kuunza yakawedzera mweya mutsva kune yechinyakare genre kupfuura Fortnite uye Co neavo enguva dzose zvinyorwa zvinogadziridza. Pakupedzisira, iyo gameplay iri kuchinja muHondo Royale mitambo uye kwete kungotarisa chete. Naraka: Bladepoint inotaridzika zvakanaka zvakadaro. Zvakatowanda: Iyo ingangove imwe yemitambo yakanakisa yenhandare yehondo parizvino.
Asi vatambi vanofanirwa kunetsekana nehunyanzvi pakutanga: kurwa kunotyisa, kushungurudza, kusarongeka - uye kazhinji kunopera mukukundwa. Saka chii chaunofanira kuita? Shandura kupopota kuita hondo dzehungwaru. Ipapo kamwe kamwe Naraka: Bladepoint inonakidza nekuti inogona kutamba kune simba rayo. Iyo yekurwisa gameplay inotyisa, kurwiswa kunogona kusanganiswa kuita hurongwa hwemaketani. Ndezvekugumbura muvengi wako. Sokutaura kwakaita Muhammed Ali: fararira seshavi, unoruma senyuchi. Kana uchinge wagona hunhu hwako - kana akati wandei kana uri nyanzvi - mafaro achangotanga.
Nekudaro, mumutambo wekutenga-2-kutamba, kunyangwe iri yakachipa, haufanirwe kutsamwiswa nekugara uchitenga premium. Iko kushambadza kwaigona kuve kwakaiswa zvakapusa.
Pakupedzisira, Naraka: Bladepoint inoshanduka kwete kungove kuyedza kwakashinga, asiwo kwakabudirira. Nekudaro, nekuda kwemamwe mabhugi uye server matambudziko, izvi hazvisati zvaongororwa kusvika kumagumo. Sezvineiwo nemazita anokwikwidza mumhando, nguva inozotaura kuti pfungwa ye24 Varaidzo inogona kurarama kwenguva yakareba sei pamusika. Mutambo wacho zvechokwadi waikodzera.
€20 Steam chikwereti * tenga
mhedziso Naraka: Bladepoint inozorodza zvakasiyana uye inounza dhamo rekuvandudza kune yazvino yekare yehondo royale genre. Simba guru ndiro zvakare kushaya simba kukuru kwemutambo: kurwa kwepedyo. Iwe unofanirwa kuikunda, asi zvino inonakidza chaizvo.
Kare De Zoch kütt: Zvitsva zvakaburitswa kubva kuZoch Verlag
Inotevera Exit Series: Ishe weRings arikuuya zhizha rino
Humambo hweAmalur: Kuverengera zvakare kweNintendo Chinja munaKurume
Kuedzwa: Dungeon Roll 2nd Edition kubva kuPegasus Spiele
Playstation 5: Burger King yakaburitsa ruzha rwekutanga rwekoni?
Playstation 5 controller yakaratidzwa: Izvi ndizvo zvinogona kuitwa neiyo itsva DualSense isina waya yekudzora unit